देशभक्ति चलचित्र 'काँडेतार ' वैशाखमा रिलिज हुँदै! | RatoTara.com Websoft University
देशभक्ति चलचित्र 'काँडेतार ' वैशाखमा रिलिज हुँदै!
शिव भट्टराई,मोरङ। रातो तारा डट कम,फिल्म ‘काँडेतार’ को छायांकन सकिएको छ । प्रदेश १ र २ का विभिन्न स्थानमा छायांकन गरिएको फिल्मको छायांकन आइतबार सकिएकोहो । ३५ औं दिनको नियमित छायांकन पछि फिल्म सकिएको निर्देशक नवल खड्काले बताए । फिल्म युनिट भने सोमबार काठमाडौं फर्किँदैछ ।
निर्माता समेत रहेका निर्देशक नवल खड्काले फिल्मको सुटिङ विराटनगरबाट सुटुक्क सुरु गरेका थिए । फिल्मको बिषयबस्तु अलि गोप्य भएकोले देश तथा विदेशबाट हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै निर्माण युनिटले गुपचुपमैफिल्मको छायांकनसकाएकोहो ।
‘नेपाल र भारतको सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा फिल्म बन्न लागेको हो । फिल्मको कथा महत्वपूर्ण भएकोले छायांकनमा कहिँकतै बाट अवरोध नहोस् भनेर सुटुक्क सकिएको हो’ निर्देशक खड्काले भने। उक्त फिल्म नयाँ वर्ष वैशाखमा रिलिज हुने भएको उनले बताए।
फिल्ममा गौरव पहारी, रेविका गुरुङ, सुरविना कार्की, रविन्द्र रञ्जन झा, मुरली धर, प्रेम सुब्बा, परशुराम चौधरी, संजय खतिवडा, राजेन्द्र भगत, पन्नालाल सिकदार, प्रकाश अनुराग, प्रेम कार्की, महेश गिरी र बालकलाकार नादिया खड्का र सनया खड्का लगायतको अभिनय रहेको छ ।शिवम अधिकारी र नवल खड्काकै लेखन रहेको फिल्ममा सौरभ लामाको छायांकन, श्री श्रेष्ठको द्वन्द, कविराज गहतराजकोनृत्यरहेकोछ ।
मणि थापा, दीपक शर्माको संगीत रहेको फिल्मको कार्यकारी निर्माता सत्यकला राई हुन्। फिल्म सामना फिल्मस् प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको हो।नवलले यस अगाडि राष्ट्रियताको बिषयमा दशगजा,आवाज, भीमदत्त लगायतका फिल्म बनाएका थिए ।